Mayelana NATHI - Kaiyuan Chicheng Abrasive Material Co., Ltd.
I-Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd. yasungulwa ngo-2003 Iyinkampani yokuhweba esebenza ngokukhethekile ukuhweba kwasekhaya nakwamanye amazwe, ukuzilawula kanye nokungenisa i-ejenti nokuthekelisa izimpahla nobuchwepheshe. Le nkampani itholakala esifundeni saseHedong, eTianjin. Njengoba idolobha ethekwini, Tianjin has a inzuzo yemvelo yokungenisa kanye ukuthekelisa ibhizinisi, kanye zokuhamba kuyinto elula.
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani njengamanje ifaka phakathi: imikhiqizo yamakhemikhali i-potassium fluoborate (ngaphandle kwezimpahla eziyingozi nezidakamizwa ezandulelayo), izinto zokusetshenziswa (i-zirconium corundum, ama-abrasives e-ceramic, i-cryolite), amathuluzi abhidlizayo (amasondo ahlukahlukene wokugaya, isondo lekhasi, i-chip, i-emery disc) nendwangu yezimboni (yonke i-polyester, lonke ukotini, ukotini we-polyester) wendwangu ye-emery, njll.
Njengamanje, isikali sokuhweba senkampani siyanda usuku nosuku, futhi inkampani izuze ukwethenjwa kwamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngekhwalithi yomkhiqizo wayo nedumela elihle! Lokhu kwenza inkampani yethu nemikhiqizo ibe nedumela eliphakeme nesabelo semakethe ekhaya nakwamanye amazwe. Ngasikhathi sinye, sihlala sibeka izintshisekelo zamakhasimende ethu kuqala, futhi sizinikele ekunikezeni imikhiqizo nezinsizakalo ezingcono kumakhasimende ethu ngamunye.
Ifilosofi yebhizinisi lethu: "Ukugxila ekuthembekeni, ikhasimende kuqala"
Inzuzo yethu yomkhiqizo: "Ukuthengisela okwanele nentengo enengqondo"
Ngikholwa ukuthi konke ukubambisana kuzosisondeza komunye nomunye!
Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane